ခ်စ္တာနဲ႔ ႀကိဳက္တာကို ကြဲကြဲျပားျပားဘယ္လို ခြဲျခားမလဲ – Trend.com.mm
အခ်စ္ဆိုတာကို အတိအက် မသိပဲနဲ႔ `ငါ မင္းကို ခ်စ္တယ္´ လို႔ ေျပာေနၾကတဲ့ လူေတြ အားလံုးအတြက္ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္လို႔ ေဝမၽွလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
ခ်စ္မိတာလား ဒါမွမဟုတ္ ႀကိဳက္မိတာလား?
၁။ ေဇာေခၽြးေတြ ျပန္ေနတာလား။ ရင္ခုန္ႏႈန္းေတြ တဒုန္းဒုန္းနဲ႔ ျဖစ္ေနတာလား။ ေျပာဖုိ႔ စကားေတြက ရင္ေခါင္းထဲကေနကို မထြက္ဘူး ျဖစ္ေနတာလား။ ဒါ အခ်စ္ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါ သေဘာက်တာပါ။
၂။ မင္းရဲ႕ မ်က္စိေအာက္က အေပ်ာက္ကို မခံႏိုင္ဘူး။ တစ္ခဏေလး လက္တြဲျဖဳတ္ရမွာကို သိပ္စိုးရိမ္ေနတယ္။ ဒါ အခ်စ္ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါ ရမၼက္ပါ။
၃။ ဂုဏ္ယူၿပီး သူ႕ကို ထုတ္ႂကြားမယ္။ အဲဒီလို ထုတ္ႂကြားရတာကိုပဲ သေဘာက်ေနတယ္။ ဒါ အခ်စ္ မဟုတ္ဘူး။ မင္း ကံေကာင္းလို႔ပါ။
၄။ မင္းရဲ႕ အနားက တစ္ဖ၀ါးမွ မကြာ သူ႕ကုိ ေနေစခ်င္တာလား။ ဒါ အခ်စ္ မဟုတ္ဘူး။ အထီးက်န္လို႔ေလ။
၅။ လူတိုင္း လိုလားအပ္တဲ့ အရာတစ္ခုမို႔ သူ႕ကို မင္းအနားမွာ ရွိေစခ်င္တာလား။ ဒါ အခ်စ္ မဟုတ္ဘူး။ ပုိင္ဆိုင္ခ်င္စိတ္ပါ။
၆။ သူက မင္းကုိ အနမ္းေလး ေပးတယ္။ မင္းရဲ႕ လက္ကေလးကို ျမဲျမဲ ဆုပ္ကိုင္ထားလို႔ မင္း သူ႔အနားမွာ ရွိေနတာလား။ ဒါ အခ်စ္ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈ နည္းေနလို႔ပါ။
၇။ အခ်စ္ပါလို႔ ေျဖာင့္ခ်က္ေပးၿပီး သူ႔အနားမွာ မင္းေနေပးတာ သူ႔ကို လံုး၀ မထိခုိက္ေစခ်င္လို႔ မဟုတ္လား။ ဒါ အခ်စ္ မဟုတ္ဘူး။ သနားတာေလ။
၈။ သူ႔ရဲ႕ အၾကည့္တစ္ခ်က္မွာ ရင္ခုန္သံ ရပ္တန္႔မတတ္ ျဖစ္သြားလို႔ သူ႔ကုိ ပံုအပ္လိုက္ခ်င္တာလား။ ဒါ အခ်စ္ မဟုတ္ဘူး။ အ႐ူးအမူး စြဲလမ္းတာ ေလာက္ပါ။
၉။ သူ႔ကို သိပ္ ဂ႐ုစိုက္လို႔ သူ႔အျပစ္ေတြကို ခြင့္လြတ္ေပးႏိုင္တာလား။ ဒါ အခ်စ္ မဟုတ္ဘူး။ သူငယ္ခ်င္းေကာင္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈပါ။
၁၀။ အေတြးထဲမွာ ေန႔တုိင္းလိုလို သူ႔တစ္ေယာက္တည္းပဲ ရွိေနတယ္လို႔ မင္း သူ႔ကုိေျပာသလား။ ဒါ အခ်စ္ မဟုတ္ဘူး။ လိမ္ေနတာ။
၁၁။ သူ႔အတြက္ ကိုယ့္ႀကိဳက္တဲ့ အရာအားလံုးကို စြန္႔လႊတ္ဖို႔ ၀န္မေလးဘူး မဟုတ္လား။ ဒါ အခ်စ္ မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါ ေပးကမ္း စြန္႔ၾကဲ ရဲတဲ့ စိတ္ဓါတ္ပါ။
အခု အခ်စ္ဟာ သိပ္ ခါးသီး နာက်င္ေနေစမယ္ ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ဘာေၾကာင့္ ခ်စ္ၾကဦးမလဲ။ ဘာအတြက္ေၾကာင့္ ဒါႀကီးကို တစ္ဘ၀လံုး ရွာေနဦးမလဲ။ က်ေနာ္တို႔ ဒါကို ဘာလုပ္ဖုိ႔ ေတာင့္တေနဦးမလဲ။ ဒီအနာတရ၊ ဒီမခ်ိမဆံ့ ေ၀ဒနာ၊ ဒီဒုကၡေတြက ဘာေၾကာင့္လဲ။ ကိုယ့္ရဲ႕ အတၱကိုေတာင္ ဆန္႔က်င္ရဲတဲ့ သတၱိနဲ႔ေလ။ အဲဒါ ဘာအတြက္လဲ။ အေျဖက သိပ္႐ိုးရွင္းပါတယ္။ အဲဒါ အခ်စ္ေၾကာင့္ေလ။
အချစ်ဆိုတာကို အတိအကျ မသိပဲနဲ့ `ငါ မင်းကို ချစ်တယ်´ လို့ ပြောနေကြတဲ့ လူတွေ အားလုံးအတွက် စဉ်းစားကြည့်ရအောင်လို့ ဝေမျှလိုက်ပါတယ်ေနာ္။
ချစ်မိတာလား ဒါမှမဟုတ် ကြိုက်မိတာလား?
၁။ ဇောချွေးတွေ ပြန်နေတာလား။ ရင်ခုန်နှုန်းတွေ တဒုန်းဒုန်းနဲ့ ဖြစ်နေတာလား။ ပြောဖို့ စကားတွေက ရင်ခေါင်းထဲကနေကို မထွက်ဘူး ဖြစ်နေတာလား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ သဘောကျတာပါ။
၂။ မင်းရဲ့ မျက်စိအောက်က အပျောက်ကို မခံနိုင်ဘူး။ တစ်ခဏလေး လက်တွဲဖြုတ်ရမှာကို သိပ်စိုးရိမ်နေတယ်။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ ရမ္မက်ပါ။
၃။ ဂုဏ်ယူပြီး သူ့ကို ထုတ်ကြွားမယ်။ အဲဒီလို ထုတ်ကြွားရတာကိုပဲ သဘောကျနေတယ်။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ မင်း ကံကောင်းလို့ပါ။
၄။ မင်းရဲ့ အနားက တစ်ဖဝါးမှ မကွာ သူ့ကို နေစေချင်တာလား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ အထီးကျန်လို့လေ။
၅။ လူတိုင်း လိုလားအပ်တဲ့ အရာတစ်ခုမို့ သူ့ကို မင်းအနားမှာ ရှိစေချင်တာလား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ ပိုင်ဆိုင်ချင်စိတ်ပါ။
၆။ သူက မင်းကို အနမ်းလေး ပေးတယ်။ မင်းရဲ့ လက်ကလေးကို မြဲမြဲ ဆုပ်ကိုင်ထားလို့ မင်း သူ့အနားမှာ ရှိနေတာလား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု နည်းနေလို့ပါ။
၇။ အချစ်ပါလို့ ဖြောင့်ချက်ပေးပြီး သူ့အနားမှာ မင်းနေပေးတာ သူ့ကို လုံး၀ မထိခိုက်စေချင်လို့ မဟုတ်လား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ သနားတာလေ။
၈။ သူ့ရဲ့ အကြည့်တစ်ချက်မှာ ရင်ခုန်သံ ရပ်တန့်မတတ် ဖြစ်သွားလို့ သူ့ကို ပုံအပ်လိုက်ချင်တာလား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ အရူးအမူး စွဲလမ်းတာ လောက်ပါ။
၉။ သူ့ကို သိပ် ဂရုစိုက်လို့ သူ့အပြစ်တွေကို ခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တာလား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက်ရဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးမှုပါ။
၁၀။ အတွေးထဲမှာ နေ့တိုင်းလိုလို သူ့တစ်ယောက်တည်းပဲ ရှိနေတယ်လို့ မင်း သူ့ကိုပြောသလား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ လိမ်နေတာ။
၁၁။ သူ့အတွက် ကိုယ့်ကြိုက်တဲ့ အရာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ဝန်မလေးဘူး မဟုတ်လား။ ဒါ အချစ် မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါ ပေးကမ်း စွန့်ကြဲ ရဲတဲ့ စိတ်ဓါတ်ပါ။
သူ ဝမ်းနည်းတဲ့အခါ မင်း အသည်းကြွေမတတ် ခံစားရသလား။ ဒါမှ အချစ်လေ။
သူရဲ့ နာကျင်မှုတွေ အတွက် အပြင်ပန်း မဟုတ်တောင် စိတ်ထဲက ကျိတ် ငိုကျွေးခဲ့ရသလား။ အဲဒါ အချစ်လေ။
မင်းရဲ့ မေတ္တာစစ် မေတ္တာမှန်နဲ့ မင်းရဲ့ ရင်တွင်း ခံစားချက်တွေကို သူ မြင်နိုင်ရဲ့လား။ ဒါမှ အချစ်လေ။
ဒုက္ခတွေ သုခတွေနဲ့ စည်းနှောင်ထားပြီး အဲဒီ ကြီးမားတဲ့ အားတွေက မင်းတို့ နှစ်ယောက်ကို လက်တွဲညီညီ ဖြစ်အောင် ဖန်တီးထားတာလား။ ဒါဆို အချစ်လေ။
သူ့ရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို သူ့ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုအနေနဲ့ လက်ခံထားတာလား။ အဲဒါ အချစ်ပါ။
တခြားသူတွေကို စွဲဆောင်ဖို့ ကြိုးစားပေမယ့် သူ့ကိုပဲ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ သစ္စာရှိရှိနဲ့ အတူ လက်တွဲနေသလား။ ဒါဆို အချစ်လေ။
မင်းရဲ့ နှလုံးသား၊ မင်းရဲ့ အသက်နဲ့ မင်းရဲ့ ဘဝကို သူ့ကို ပေးဖို့ ဝန်မလေးဘူးလေ။ ဒါဟာ အချစ်ပဲပေါ့။
အခု အချစ်ဟာ သိပ် ခါးသီး နာကျင်နေစေမယ် ဆိုရင် ကျနော်တို့ ဘာကြောင့် ချစ်ကြဦးမလဲ။ ဘာအတွက်ကြောင့် ဒါကြီးကို တစ်ဘဝလုံး ရှာနေဦးမလဲ။ ကျနော်တို့ ဒါကို ဘာလုပ်ဖို့ တောင့်တနေဦးမလဲ။ ဒီအနာတရ၊ ဒီမချိမဆံ့ ဝေဒနာ၊ ဒီဒုက္ခတွေက ဘာကြောင့်လဲ။ ကိုယ့်ရဲ့ အတ္တကိုတောင် ဆန့်ကျင်ရဲတဲ့ သတ္တိနဲ့လေ။ အဲဒါ ဘာအတွက်လဲ။ အဖြေက သိပ်ရိုးရှင်းပါတယ်။ အဲဒါ အချစ်ကြောင့်လေ။
ဘယ်လောက်ထိ စွဲဆောင်အား ကောင်းသလဲဆိုရင် အချစ် မရှိဘူး ဆိုတဲ့လူတွေတောင် ခံစားကြည့်ချင်တယ်။ ရှိပြီးသား လူတွေက သူများကိုလည်း ခံစားစေချင်တယ်လေ။